လ​တော်​သလင်း သင်​ဖြူးခင်း — Steemit
yuzana (59) in myanmar • last year
အခုဆိုရင်​မြန်​မာတို့ရဲ့ဆစ်​နှစ်​လရာသီထဲက ​တော်​သလင်းလကို​ရောက်​​လာခဲ့ပြီဖြစ်​သည်​ ​တော်​သလင်းလသည်​မိုးဥတုရဲ့​နောက်​ဆုံးကုန်​ကာနီးလထဲမှာပါဝင်​​သော​ကြောင့်​​ရှေးလူကြီးများကနောက်​ဆုံးသီတင်းကျွတ်​မှာ ရွာတဲ့ပလင်​​ဆေးမိုးတမိုးအမှီ သက်​တန်းရင့်​​သောနှမ်းကြီးကိုဒီ​တော်​သလင်းလမှာအမှိစိုက်​ကြပါသည်​၊ တမိုးတွင်းလုံးမိုးသက်​​လေပြင်းများမုန်​တိုင်းများလဲ ​တော်​သလင်းလ​ရောက်​လျှင်​ ပြီးဆုံးပြီလို့​ပြောကြပါသည်​၊ မိုးသက်​​လေကင်း​သောဒီ​တော်​သလင်းလမှာ မြစ်​​ရေပြင်​သည်​လည်း သင်​ဖြူး​လေးခင်းထားသကဲ့သို့ညိမ်​သက်​စွာရှိ​နေ​လေသည်​။ထို​ကြောင့်​မြန်​မာတိုရဲ့ရိုးရာ​လှေပြိုင်​ပွဲကို​တော်​သလင်းလမှာ ကျင်းပကြခြင်းဖြစ်​ပါသည်​၊
ရာသီတခုနဲတခုအကူးအ​ပြောင်းမို့ ရာသီဥတုသည်​မပူလွန်းမ​အေးလွန်းသဖြင့်​​နေလို့ထိုင်​လို့အ​ကောင်းဆုံလဖြစ်​ပါသည်​၊ဧရာဝတီမြစ်​ရဲ့​ဘေးမှာ မကြာခင်​ကစိုက်​ထား​သော​ပြောင်းခင်း​လေးက​ပြောင်းပင်​​လေး​တွေကလဲ့လူထတိုင်​စာ​လောက်​ရှိ​နေတဲ့အချိန်​​လေ​ပြေ​လေး​တွေတဖြူးဖြူးတိုက်​ခပ်​​လိုက်​တဲ့အခါ ဟိုဟိုဒီဒီ လွင့်​လူး​နေကြတာကို​တွေရပါမည်​၊ ဒီမြင်​ကွင်းကို ကြည့်​ပြီးစာ​ရေးဆရာ​တေး​ရေးဆရာတ​ယောက်​အပီအပြင်​ဖွဲ့ဆိုထားတဲ့သီချင်း​လေးကိုသတိယမိ၏။
​တော်​သီလင်းလ​ရောက်​လာလျှင်​ မိုးများလဲနည်းသွားပြီဖြစ်​သဖြင့်​ ​ရေ​ဘေးအန္တရယ်​မှလည်းအ​တော်​​လေးစိတ်​​အေးသွားရပြီဖြစ်​သည်​ ထို​ကြောင့်​​ရေ​နောက်​ထပ်​မတိုးလာ​တော့သဖြင့်​ ​အောက်​သို့ဆက်​လက်​ပြီးမစီးဆင်​နိုင်​​သော မြစ်​ကျိုးအင်းများအိုင်​များသည်​လည်း ​ရေပြင်​သည်​ငြိမ်​သက်​စွာ​ရေ​သေဖြစ်​​နေ​လေသည်​၊ထိုအခါ​တော်​သလင်းလရဲ့သ​င်္ကေတကြာပင်​ကြာပန်းများ၊ ​ဗေဒါပန်းများသည်​လည်း၊မည်​သည့်​အရပ်​ကိုမှမ​မျောလွင့်​ဘဲ ​ရောက်​တဲ့​နေရာမှာနန်းထိုင်​ပြီး အစွန်းကုန်​ပွားများကြ၏
အစွန်းကုန်​ပွင့်​လန်းကြ၏။မကြာမှိမြန်​မာတို့ရဲ့ရိုးရာပွဲ​တော်​ကထိန်​ပွဲ ကြီး​ရောက်​​တော့မည်​ဖြစ်​သည်​၊ ဤအချိန်​တွင်​ ကြာနွယ်​ကြာရိုးများရင့်​​နေကြ၍ကြာနွယ်​ကိုခြည်​အဖြစ်​ထုပ်​၊ကြာသင်္ကန်းများရက်​လုပ်​ကြပြီးဘုရားမှာကြာသင်္ကန်းများကပ်​လှူကြ၏၊
ကထိန်​ပွဲတွင်​၂၄နာရီအတွင်းဝါဂွမ်းမှစ၍သင်္ကန်းဖြစ်​သည်​အထိ အပြီးအစီးယက်​လုပ်​ရ​သောမသီုးသင်္ကန်းများကိုလဲယက်​လုပ်​ကြ၏၊ထိုမသိုးသင်္ကန်းများကိုလဲပြိုင်​ပွဲအသွင်အပြိုင်​အဆိုင်​​ယက်​လုပ်​၍ကထိန်​သင်္ကန်းများကပ်​လှူကြ​လေ၏၊မသိုသင်္ကန်းယက်​လုပ်​ရာတွင်​တက်​ညီလက်​ညီနဲ့ ဗိုင်​ငင်​သူကငင်​၊ချီချသူကချ၊ယက္ကန်းယက်​သူကယက်​နှင့်​မခိုမကပ်​တက်​ညီလက်​ညီလုပ်​မှသာလျှင်​​အောင်​မြင်​နိုင်​၏၊ထို​ကြောင့့်​ထိုပြိုင်​ပွဲသည်​လည်းကုသိုလ်​လဲရ၊စည်းလုံးမှူလဲပြ​သောပြိုင်​ပွဲဖြစ်​​လေသည်​၊
မသိုးသကံန်း ကြာသင်္ကံန်းများကို​ရှေးယခင်​​ခေတ်​ကတ​ဆောင်းမုန်းလ ကထိန်​လ​ရာသီရောက်​သည့်​အခါတိုင်း အပြိုင်​အဆိုင်​ယက်​လုပ်​ကြ၏၊
myanmar boat fastival happy
last year by yuzana (59)
တော်သလင်းလ လှေပြိုင်ပွဲတွေကြာင်း ကျုပ်တို့လဲရေးရအုံးမယ်
yuzana (59) · last year
​ရေးသင့်​တယ်​ဗျာ့ ဒီလက ​လှေပြိုင်​ပွဲလ သိတ်​ကိုအနှစ်​သာရရှိတဲ့ပွဲမို ကျွန်​​တော်​​တော့သ​ဘောကြမိတယ်​
ဟုက်​တယ်​ အဲ့ဒီအမျှင်​​လေး​တွေစုပြီး ယက်​တာကြာအများကြီးကုန်​မှနဲနဲ ပဲရ​တေ
winko (52) · last year
လှေပြိုင်ပွဲတို့ တော့ နည်းသွားပြီလေ
မသိုးသင်္ကန်း ကြာသင်္ကန်းတို့ ကတော့
ပြိင်ပွဲ ရော ပူဇော်တာမှာရော ယက်လုပ်နေတုန်းပါပဲ
ဟုပ်​တယ်​ တခါတ​လေ TVကလွှင့်​တယ်​
uthantzin (57) · last year
တော်သလင်းလ လှေပြိုင်ပွဲ...တန်ဆောင်မုန်းလ ၏အထင်ကရ ကထိန်ပွဲတွေဟာ ရိုးရာပွဲတော်တွေဖြစ်ပြီး ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကြရမှာ အမှန်ပါပဲအစ်ကို။ဒါလေး message ပေးထားတာ ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။
nweoomon (51) · last year
​ကောင်းတယ်​ဗျာ အဲ့လို​လေး ကျင်းပ​ပေးတာ
mahaw (59) · last year
ကျွန်‌‌တော်‌ ‌လှေပြိုင်‌ပွဲ မကြည့်‌ဖူးဘူး။
တော်သလင်းလမှာ နောက်ထပ်ရေးစရာ ရှိသေးတယ် ဦးယုရေ စောင့်ကြည့်နေနော်။
ရေးထားတာလေး ချစ်စရာကောင်းတယ် 😍
This post has receiveda11.47% upvote from thanks to: @yuzana!!!
လရာသီ ဖွဲ့လည်းဖွဲသွားတယ် ရိုးရာပွဲတော်တွေလည်းထိန်းသိမ်းဖို့အကြံပြုသွားတယ် ။ကောင်းတယ်။
လှေလှော်ပြိုင်ပွဲကတော့ ငယ်ငယ်ကကြည့်ဖူးတယ် ခုတော့ ကျွန်တော်တို့ဆီပျောက်ပြီ
You gota3.51% upvote from @postpromoter courtesy of @yuzana!
This post has receiveda3.99 % upvote from @boomerang.